KULAMO WADATASHI OO LALA YEESHAY SIYAASIYIINTA GOBOLKA BAKOOL – GMDQ
KULAMO WADATASHI OO LALA YEESHAY SIYAASIYIINTA GOBOLKA BAKOOL
Kulamo wadatasho oo ku saabsan hirgelinta doorashada qof iyo cod sannadka 2020ka ayaa lagu qabtay Degmada Xudur ee Gobolka Bakool taariikhdu markay ahayd Dec 18-19, 2017.
Guddoomiyaha GMDQ Marwo; Halima Ismail Ibrahim, oo kulamada ka qaybgashay ayaa mas’uuliyiinta kala duwan ee gobolka uga warbixisay hadafka iyo ujeeddada kulammadan. Waxay uga warbixisay heerarkii uu dalku u soo maray hirgelinta doorashooyinka ilaa 1953dii.
Waxay xustay sannadkan 2017ka inaan joogno heerkii ugu wanaagsanaa ee ka dhabaynta riyadii dheerayd ee hirgelinta doorashada. Hoggaanka qaranka iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa u heellan inay maanta ogaadaan dareenka bulshada ee ku wajahan sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Waxgaradka gobolka Bakool iyo siyaasiyiinta ayaa guddiga la wadaagay khibradda ay ka arkeen 48 sano oo dib dhac uu galay in dalkaan laga hirgeliyo nidaamka axsaabta badan.
Siyaasiyiinta degmooyinka Tiyegloow, Rabdhure iyo Xudur ayaa sheegay in dalka ay suuuragal tahay inuu ka dhaco doorasho 2020, balse ay ka horeyso in amniga la sugo si dadka ay ugu dhiiradaan inay codkooda siiyaan masuulkey u arkaan inuu ku wanaagsan yahay hogaaminta dalka.
Kulanka ayaa lagu soo bandhigay muhimmadda ay leedahay doorashadu, caqabadaha ka hor iman kara doorashada 2020ka, iyo sidii dadwaynuhu uga qayb qaadan lahaayeen xal u helidda caqabadaha.
Dood wadaag ballaaran ka dib, waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxay muujiyeen sida ay ugu diyaar yihiin inay u istaagaan xaqiijinta doorashada 2020ka iyo in laga gudbo nidaamka 4.5 ee dalkeena ragaadiyay.
Waxgaradka iyo siyaasiyiinka Degmada Xudur ayaa si wayn uga qayb galay kulamada wadatashiga dadwaynaha ee Guddigu ka waday dalka oo dhan, Waxayna ka doodeen suaalo dhowr ah oo ku saabsan doorasho waxay tahay iyo waajibaadka laga doonaayo muwaadinka wax dooranaayo? Xildhibaan ka tirsan dowlad Goboleedka Konfur Galbeed Xasan Maxamed Isaaq ayaa tilmaamey inay ka dhici karaan Doorasho dalka 2020, ayna tahay arrin wanaagsan in shacabka lala yeesho wadatashiyo ku aadan habka ay ku qabsoomi karto Doorasho qof iyo cod.
Waxay kaloo tilmaameen siyaasiyiintu in ay muhiim tahay sameysashada xisbiyo siyaasadeed oo ay dadka ku soo dooran karaan xisbigii waxqabad u soo bandhiga shacabka.
Dhinaca kale siyaasiyiinta xubno ayaa walaac ka muujiyey qabsoomida qoorasho qof iyo cod iyadoo wadanka meelo badan ay gacanta ku haayaan kooxaha Alshabaab iyo amni la’aanta, dhaqaalo yarida iyo midnimo la’aanta shacabka dhexdooda ka jira
Intaa ka dib waxgaradka ayaa soo jeediyey inay iska diiidaan shacabka Xudur siyaasiyiinta ka cagajiidaaya danaha dalka iyo dadka
Waxay sidoo kale waxgaradka soo jeediyeen in shacabka ay muujiyaan isku duubni, loona baahan yahay inay helaan wacyigelin ku saabsan sidii dalkooda ay u soo doortaan muwaadin waxqabad iyo isbadal ku soo kordhin karo dalka gaar ahaan degmada Xudur ee Gobolka Bakool
GMDQ ayaa u faahfaahiyey dadwaynaha deegaanka daraasado laga sameeyey sida doorasho uga dhacday dalal sida Somaliya oo kale ah oo ay ka mid yihiin Ciraaq , Liberia, Afganistan Nigeria Sierra Leone oo ay ragaadiyeen colaaduhu, hadana waxay qabsadeen doorasho qof iyo cod ah, Somaliyana kama liidato dalalkaas oo waxay waddaa inay dalka ka hirgeiyaan doorashado xornimo ku dhacda.
taariikhdu tahay 19-12-2017, lagu soo xeray, wadooyinka in dalka ay ka dhici karaan doorasho uuna ka dhacay dalal aad uga liita Somaliya.
Waxaa la soo qaatey tusaalooyin ku aadan wadamo ay ka dhaceyn dagaalo hadana si deg deg ah ku heshiiyey sida wadanka Liberia oo dagaal ka dhax dhacey sanadkii 2003 isla markaana heshiiyey sanadkii 2005-tii
Shirarkaan wadatashiga ah ayaa ah shirar laga qaban doono Gobolada dalka Somaliya oo dhan si looga qayb geliyo bulshada xal u helidda mushkiladaha, taasoo lagu xaqiijin doono qabsoomida doorashada qof iyo cod.
Waxaa la faafiyey December 20, 2017 August 16, 2018